Aqriso: Somaliland Wax Badan oo adan Ogeyn oo ka socdo Maanta? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Aqriso: Somaliland Wax Badan oo adan Ogeyn oo ka socdo Maanta?
Aqriso: Somaliland Wax Badan oo adan Ogeyn oo ka socdo Maanta?
Waxaa maanta oo Isniin ah Taariikhduna ay ku beegan tahay 13-ka November shacabka Somaliland ay u dareereen dareeraan goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynihii Shanaad tan iyo markii uu gobolkaasi ku dhawaaqay inuu ka go’ay Soomaaliya inteeda kale, in ka badan Shan iyo Labaatan sanno ka hor.
Shacabka Somaliland oo safaf dhaadheer ku jira ayaa maanta lagu arkayaa wadooyinka waa weyn ee Somaliland, iyaga oo ku codeynaya Sanaadiiq la dhigay magaalooyinka iyo degmooyinka ay joogaan.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka C/qaadir Iimaan Warsame ayaa shacabka qaatay kaarka cod bixinta ugu baaqay in aysan khasaarin, islamarkaana ay doortaan Saddexda Musharax midkood.
Afhayeenka Guddiga Doorashooyinka Saciid Cali Muuse ayaa sheegay codbixiyeyaasha maanta codeynaya in aysan soo xiran karin astaan muujineysa xisbiga ay taageersan yihiin.
Doorashada Madaxtinimo ee Soomaaliland waxaa sanadkan ku tartamaya Musharaxiinta kala ah Faysal Cali Waraabe, Guddoomiyaha Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka UCID, Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Maamulka Soomaaliland C/raxmaan C/laahi Cirro oo u taagan xisbiga Wadani iyo Muuse Biixi Cabdi oo xilal kala duwan ka soo qabtay Xukuumadihii Soomaaliland ee kala duwanaa, una taagan xisbiga Kulmiye ee talada haya.
Si looga hortago in doorashada lagu shubto ayaa waxaa markii ugu horreysay goobaha codbixinta lagu isticmaalayaa qalab aqoonsanaya indhaha codbixiyayaasha.
Mas’uuliyiinta Somaliland ayaa waxa ay ku baaqeen in maalinta codbixinta la xayiro isticmaalka baraha bulshada si looga hortago in barahaasi lagu faafiyo warar been abuur ah
Shacabka ku dhaqan Soomaaliland ayaa waxa ay isku diyaarinayeen markii Shanaad Doorashada Madaxweynanimo ee Somaliland, markii labaad ayaa lagu wadaa in degaanada Soomaaliland ay ka dhacdo Doorasho qof iyo cod ah.
Ammaanka magaalada Hargeysa ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana wadooyinka iyo goobaha ay ka dhacayaan codbixinta la soo dhoobay Ciidamo Boolis ah oo badan.